Shabaabkii ugu badnaa oo gudaha u soo galay deegaanada Hirshabeele | Keydmedia
Shabaabkii ugu badnaa oo gudaha u soo galay deegaanada Hirshabeele
Al-Shabaab ayaa la sheegayaa in ay weeraradooda u soo weeciyeen dhanka deegaannada Hirshabeelle, kadib culeysyo ay kala kulmeen howlgallada ay ciidamada dowladda kawadaan Shabeelaha Hoose.
MUQDISHO, Soomaaliya - Deegaannada Hirshabeelle ayaa la sheegayaa in ay haatan ku soo qul-qulayaan dagaal yahanno ka tirsan Al-shabab, kuwaas oo weeraro dhabba gal ah ku qaada masuuliyiinta maamulkaas ee ku safraya inta u dhaxeyso Muqdisho iyo Jowhar.
Wasiirka Wasaaradda amniga Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Kheyre oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in xubno ka tirsan dhaq dhaqaaqa Al-Shabaab oo ka soo firxaday howlgalka ay ciidamada dowladda kawadaan Shabeelaha Hoose ay haatan soo gaareen deeganno ka tirsan Hirshabeele.
Wasiirka waxaa uu sheegay in Alshabaab weeraradooda gaadmada ah u soo weeceen dhanka Shabeelaha Dhexe, kadib markii ay culeysyo kala kulmeen howlgallada dowladda, waxaa uuna intaas ku daray in ay dhibaato ku hayaan shacabka iyo masuliyiinta ku safra wadda xiriro Muqdisho iyo Jowhar.
Sidoo kale Wasiirka ayaa intaas ku daray in arintaan uu maamulka Hirshabeelle Shabeelle la wadaagay Hay'adaha amniga ee dowladda Soomaaliya, islamarkaana si dhaqsi ah dhawaan wax looga qaban doono.
Hirshabeelle ayaa ka mid ah meelaha ugu amaanka xun Soomaaliya, waxaana xusid mudan in sanadkaan gudihiisa waddada xiriiriso Muqdisho Iyo Jowhar lagu dilay Xildhibaan ka tirsan maamulkaas kadib markii lagala digay gaari nooca raaxada ah uu saarnaa.